Abesifazane ababili abasebasha base-Afrika basungula isikhwama semali elanga sabafundi ababencishwe amathuba - i-Afrikhepri Fondation
Izikhwama zesikole zokuphindaphinda
Abesifazane ababili base-Afrika basungula isikhwama esikoleni sabafundi abahluphekile
Abesifazane ababili abasebasha base-Afrika benze isikhwama esinamalambu elanga. Yakhelwe ezintweni ezenziwe kabusha, ivumela abafundi abaswele ukuthi benze umsebenzi wabo wesikole kusihlwa. Amadolobhana amaningi e-Afrika awanawo amandla aphansi, kepha kwesinye isikhathi awanawo ugesi. Kusihlwa, ngaphandle kokukhanya, kuba nzima kubafundi ukwenza umsebenzi wesikole. Ukuze kuxazululwe le nkinga, abesifazane ababili abasebasha baseNingizimu Afrika uReabetswe Ngwane noThato Kgatlhanye bahlangana bathungatha inkampani iRethaka, ekhiqiza "izikhwama zesikole zelanga". Imibala, ithengwa yizinkampani, izisekelo nabantu ngabanye bese isatshalaliswa kabusha kubafundi bezikole ezazincishwe amathuba.
Les "Ukuphindaphinda izikhwama zesikole" (ama-satchel asebenziseka kabili) i-100% isetshenziswe kabusha, yenzelwe kusuka kuplastiki abasetshenzisiwe. Behlome ngabaqoqi belanga, izikhwama zesikole ezivezwe yilanga emini zizogcwalisa amabhethri abo lapho sekuyisikhathi sokuba izingane zenze umsebenzi wasekhaya. Abasunguli bachaza ukuthi lolu hlelo lubuye lunikeze abafundi ithuba lokubuyela emakhaya ngokuphepha uma kumnyama.
© skrini - Youtube
Lokhu kusungulwa akusizi abafundi kuphela, kodwa nokuqasha esifundeni sasePitoli kwazise inkampani isivele iqashe abasebenzi abayisishiyagalombili abaqashwe ngokugcwele. "Baphatha yonke le nqubo, kusukela ekuqoqeni izikhwama zepulasitiki kuya ekulethweni, okubandakanya ukuwasha, ukuhlunga nokuhlanganisa" Izikhwama Zesikole Eziphindwayo ", kuchaza uReabetswe Ngwane.
Abaqambi ababili sebevele bahlose ukudala eminye imikhiqizo ehlala isikhathi eside futhi esebenza kahle kulabo abahlupheka kakhulu, kepha okwamanje bagxile ekusabalaliseni isikhwama sesikole ezikoleni.
Inventors kanye nabafundi abamnyama, umsebenzi wokukhumbula
I-infinity - Elena Roerich (PDF)
I-Tribute kuma-black amazons aseDahomey (eBenin)
Nanny, indlovukazi yama-chestnuts